‘म आँसुको सागरमा डुबे पनि तिमी हाँसिरहनु रञ्जना’ – Todays Nepal
‘म आँसुको सागरमा डुबे पनि तिमी हाँसिरहनु रञ्जना’
कुनै बेला उनीहरु सँगै थिए, साथमा थिए दुवैजनाले साँचेका सुन्दर सपना । दुवैले मन मुटु एक बनाएर अंगालोमा बाँधिएका थिए । उनीहरूको जोडी देख्दा नेपाली चलचित्र नगरीमा धेरैले आरिस गर्थे ।
हुन पनि चोखो माया लाएर मन मुटु साटेका रञ्जना र श्याम कुनै बेला एक विना आफू जीवित कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए । मायाको गहिरो सागरमा डुबेका उनीहरुको जीवनमा कुनै बेला आँधि हुरी आउने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो ।
मान्छेको मन न हो, ठूलाठूला आँधीले छुन नसक्ने यही मनलाई कुनै बेला हावाको एउटा सानो झोंक्काले पनि बदलदिन सक्छ । शान्त तलाउमा जमेको पानीमा ढुंगा हानेजस्तै श्याम र रञ्जनाको मायारुपी सागरलाई पनि कसैले पत्तै नदिई विथोलिदिएछ ।
एक अर्काको माया विना जिउनै नसक्ने श्याम र रञ्जनाबीच ६३ को सम्वन्धमा ३६ को अवस्था आउँछ भन्ने उनीहरुले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । समय न हो बदलाव आउन कति बेर पो लाग्छ र ?
जीवनको गोरेटोमा हातेमालो गर्दै हिंडिरहेका उनीहरुले अहिले एक अर्कालाई धारेहात लगाउने अवस्थामा पुगेका छन् । सँगै जिउने कसम खाएका उनीहरुको जीवनमा अहिले अरु कसैले स्थान लिइसकेको छ तर जो मनमा बसेको माया खरीले लेखेको अक्षर मेटिए जस्तो के मेटिन्थ्यो र ?
निको भैसकेको पुरानो त्यो घाउ
अनायासै फेरि बल्झेर दुख्छ
रञ्जनाको माया चुर्लुम्म डुबेका श्यामलाई कुनै बेला माया पिरतीका गीतमात्र फुर्थे अहिले अवस्थजा अर्कै छ । रञ्जनासँग छुटेपनि उनलाई माथिका जस्तै विरही गीत मन पर्छन् । सात जुनी सँगै बाँच्ने कसम खाएको प्रियतमले छोडेपछि उनलाई अलिहे नारायण गोपालका विरही गीतहरु प्रिय लाग्ने गर्छन् ।
अहिले पनि श्यामलाई रञ्जनाका तस्वीर पल्टाउँदा स्वर सम्राट नारायण गोपालले गाएका गीतहरुमा डुब्छन् । उनलाई लाग्छ, अब कसैले रञ्जनाको याद नदिलाओस् तर आफ्नै पापी मनले कहाँ मान्छ र उनकै यादले श्यामलाई पिरोलिरहन्छ ।
अनायास सम्वन्ध टुटेपछि त्यसको दोष श्यामले आफैंलाई दिन्छन् । आफूलाई छोडेर गएपनि श्यामले सम्वन्ध टुट्नुको दोष रञ्जनाको शिरमा थुपार्न चाहेका छैनन् ।
मायाको सागरमा डुबेका बेला श्यामले सायदै सोचेका थिएनन, रञ्जना फक्रेकी फूल थिइन्, जो कुनैबेला ओइलेर र्झछ । मायाले एकोहोरिएका श्याम आज त्यही कारण पछुताउँदै विरहका गीतमा रमाइरहेका छन् ।
रञ्जनालाई ‘जानकी’ सिरियलबाट नायिका बनाउँदा उनको मनमा कुनै लोभ थिएन, न त रञ्जनाबाट फाइदा लिऊँ भन्ने स्वार्थ नै । रञ्जनाका लागि अमेरिकाको भिसा लगाउन दौडधुप गर्दा समेत उनी स्वार्थी भएनन, गरे त एकोहोरो माया मात्र । निस्वार्थ माया गरेको श्यामको मन आज ऐनाजस्तै फुटेको छ, जसलाई जोड्न अब सायद सम्भव छैन ।
जीवनका विस्कुन पस्किरहेका श्याम विगतमा र्फकन्छन् । रञ्जनाकै लागि श्यामले साथीभाइ इष्टमित्र र परिवारका सदस्यलाई टाढा बनाए ।
आफ्नो करिअर भन्दा मायालुकै सुन्दर भविष्यको कल्पनामा रमाएका श्यामले सायदै सोचेका थिए, आफूसँगै चढेको डुंगामा एक्लै पारेर छोड्छिन् भन्ने । रञ्जनालाई एकोहोरो माया गर्दा आज श्याम सबैबाट एक्लिएका छन् ।
रञ्जना भने सात समुन्द्र पारीको कुनै बिरानो मुलुकमा रमाइरहेकी छन् । जीवनमा थुप्रै सपना र इच्छाहरु साँचेका थिए श्यामले । ती सबै सपनालाई रञ्जनाकै लागि उनले तिलाञ्जली दिए ।
सातजुनी नछाड्ने कसम आएर अमेरिका पसेकी रञ्जना श्यामको मिठो मायालाई मनको कन्तुरमा चावी लगाएर विरानो मुलुकमा हाँसिरहेकी छन्, यता श्याम भने आँसुको सागरमा डुबेर जीवन कटाइरहेका छन् ।
दुवैले एक भएर अञ्जुलीमा थापेको पानी कता पोखियो थाहा भएन । १७ बर्ष अघि सिनेमा नगरीमा आफ्नै बुताले प्रवेश गरेका यी निर्देशकले रञ्जनालाई अनावश्यक सिनेमा नखेल्न भने । सोही निहुमा उनी ७ महिना माइत बसिन् । आफ्नै देशमा त रञ्जना ठुस्सिदा फकाउन खासै गाह्रो परेन श्यामलाई ।
तर बिरानो मुलुकमा पुगेर चटक्कै माया मारिदिदा श्यामले न त फकाउन नै सके न त देश फर्काउन नै । श्यामलाई थाहा छैन यति साह्रो कठोर मन रञ्जनाले कसरी बनाइन् ? अहिले श्यामलाई लाग्न थालेको छ, रञ्जनाको सपना नै अमेरिका थियो, उनी त रञ्जनाका टेक्ने भर्‍याङमात्र ।
रञ्जनाले श्यामलाई आफ्नो अमेरिका सपना पूरा गर्ने हतियारमात्र बनाइन्, श्यामले भने उनको स्वार्थ पूरा गर्न एकोहोरो साथमात्र दिइरहे । बामे सर्दै नेपाली सिने नगरीमा छिरेकी रञ्जनाले श्यामसँगै ताते गर्न सिकिन्, जव उनी आफ्ना दुई खुट्टामा दह्रोसँग उभिन सकिन्, उनलाई श्यामको आवश्यकता किन पथ्र्यो र ? उनका लागि श्याम एउटा लठ्ठीमात्र तिथए, जो रञ्जानाका लागि अब जरुरी थिएन ।
घना जंगल पार गर्न श्यामको सहारा लिएकी रञ्जनाले सुन्दर बस्तीमा पुगेपछि भने श्यामलाई चटक्कै भुलिदिइन् । रञ्जना सुन्दर बस्तीमा रमाइरहँदा श्याम भने त्यही घना जंगलमा एकोहोरो कराइरहे तर किन सुन्थ्यो र विरानो भइसकेको त्यो मनले ।
निस्वार्थ एकोहोरो माया बाँडेका श्याम आज रञ्जनालाई अंगालोमा बेर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । जीवनको गोरेटोमा मन मिल्ने भेट्टएिमा उनी अनन्तसम्मको यात्रा गर्न चहान्छन् तर उनको मनमा अझै त्रास छ भेलबाढी आएको नदी तार्ने माझी ठानेर पुनः चोट दिन्छन् कि भन्ने । जीवन एउटा पाठशाला हो, जसले थुप्रै पाठ सिकाउँछ, जुन ज्ञान किताबमा पानाभित्र भेटाइदैनन्, श्यामले आफ्नो जीवनबाट यही कुरा सिकेका छन् ।
निर्देशक श्याम भट्टराई र एउटा निजी जीवन जिएको श्याम भट्टराइलाई सँगै डोर्‍याउनु उनका लागि पहाडको टाकुरा चढ्नु जस्तै भएको छ । चोटै चोट खाए पनि श्याम अहिले जीवनसँग खुशी हुन खोज्दैछन् । आफ्नो जीवनबाट उनलाई कुनै गुनासो छैन । रञ्जना एउटा मिठो सपना थिइन्, जो समयको कालखण्डसँगै आफंै हराइन् । तर पनि श्यामले आफ्नो जीवन अझै उचाईंमा पुग्ने विश्वास लिएका छन् ।
रेखा थापाको ब्यानरमा ‘हिम्मतवाली’ सिनेमा निर्देशन गर्न लागेका श्याम अब सिने नगरीमा रमाइरहेका छन् । दाइ मानेर रेखाले श्यामलाई साथ दिएकी छिन् । यसैले उनी रेखाको साथले फुरुङग छन् । रञ्जना र आफ्नो जीवनमा एकअर्काले बाधा नपरोस, पुनः चोट खानु नपरोस, श्यामको कामना छ । तर पनि के गर्नु मन मुटु अर्पेर लगाएको मायालाई कसरी पो भुल्न सकिन्छ र ?
सन्तानको रुपमा हुर्काएको व्यक्तिले चटक्क माया मारिदिंदा श्यामका मन धेरै पटक रोएको छ । परेलीमा टिलपिलिदै गरेको आँसुलाई धेरैपटक रोकेर हाँसेका छन्, उनी । उनी कैयौ पटक हाँस्दा हाँस्दै रोएका छन् भने कैयौ पटक रुदारुदै हाँसेका छन् । यसैले त उनी रञ्जनाको तस्बिर छातिमा टाँसेर गुनगुनाउँछन् ।
श्यामको कामना छ, मैले हण्डरै हण्डर खाए पनि तिमीलाई कुनै चोट नलागोस्, रञ्जना तिम्रो जीवन फलोस्, फुलोस् ।
विकिनी वडी बनाउने चक्करमा नायिका बर्षा सिवाकोटी
नेताहरु किन गुण्डा पालिरहेका छन् ?